रिब्दीकोट गाउँपालिकामा प्रतिलिटर दुधमा एक रुपैयाँँ अनुदान ! – Palpapati
Home > समाचार > राष्ट्रिय > रिब्दीकोट गाउँपालिकामा प्रतिलिटर दुधमा एक रुपैयाँँ अनुदान !
रिब्दीकोट गाउँपालिकामा प्रतिलिटर दुधमा एक रुपैयाँँ अनुदान !
March 4, 2019 March 4, 2019 Bishnu488
कृष्ण दर्नाल पाल्पाः रिब्दीकोट गाउँपालिकाले दुध उत्पादन गर्ने व्यवसायलाई प्रतिष्ठित एवम दिगो व्यवसाय बनाउन प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान वितरण गर्न नीति ल्याएको छ ।
जीवीकोपार्जनमुखी दुग्ध उत्पादन कार्यलाई निरुसाहित गर्दै दुग्ध उत्पादन कार्यलाई व्यवसायिक बनाउन स्थानीय सरकारले प्रतिलिटर दुधमा एक रुपैयाँँ अनुदानको व्यवस्था ल्याएको हो ।
रिब्दीकोट गाउँपालिका क्षेत्र भित्र दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था वा रिब्दीकोट गाउँपालिकाभित्र स्थायी बसोबास गर्ने बासिन्दाहरु मार्फत दुध संकलन गर्ने गाउँपालिका भित्र वा बाहिरका ५ सहकारी मार्फत किसानलाई अनुदान वितरण गर्न नीति ल्याएसँगै किसानहरु खुसी बनेका छन् । अनुदान पाउनेका लागि रिब्दीकोट गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गरी दुग्ध उत्पादन कार्य सलग्न हुनुपर्ने छ ।
सहकारीले दुधको कारोबार गर्ने किसानको अनुदान माग गरेपछि प्रत्येक चौमासिक किसानको हातमा गाउँपालिकाले अनुदान दिन थालेको गाउँपालिका अध्यक्ष नारायण बहादुर जीसीले बताउनुभयो । गाउँपालिका भित्र दैनिक एक हजार दुई सय पाँच लिटर दुधको कारोबार सहकारी मार्फत हुदैँ आएको छ । गाउँपालिकाले सहकारीलाई दैनिक एक हजार दुई सय पाँच रुपैयाँँ अनुदान दिने गरी सहकारीसँग सम्झौता भएको छ ।
सहकारीले दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर एक रुपैयाँँका दरले अनुदान दिने तयारीमा रहेको छ । गाउँपालिकाले किसानलाई दुधमा अनुदानमा दिएपछि दुध उत्पादन, दुधजन्य पदार्थका परिकार उत्पादनमा वृद्धि हुने लक्ष्य छ । गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका २ सय १८ जना किसान दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा आवद्ध रहेका छन् । दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा आवद्ध किसानले अनुदान पाउने छन् । गाउँपालिकाको प्रतिवद्धता अनुरुप दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भरको लक्ष्य पुरा गर्न सहयोग गर्ने गरी दुध उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था ल्याएको हो ।
समाजमा कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा अझै पनि शिक्षित बर्ग आकर्षित हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाले सहकारी मार्फत दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर दुधमा एक रुपैयाँँ अनुदानको व्यवस्था ल्याएको गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अनिल पौडेलले बताउनुभयो । गाउँपालिका भित्र वा बाहिरका सहकारीले अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुदैँ गाउँपालिका भित्रका किसानलाई दुध अनुदान वितरण कार्यक्रममा सहयोगी भूमिका निभ्याएका छन् ।
सहकारी मापदण्ड अनुसार सञ्चालित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरु राधाकृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मसुरे, डुमे्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था डुमे्र, देवीस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था देउराली, ख्याहा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था ख्याहा, किसान दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था खस्यौलीले दुग्ध उत्पादन गर्ने किसानको दुधको बजारीकरणका आधारमा अनुदान वितरण गर्छन् ।
दैनिक कम्तिमा ५० लिटर उत्पादन गरी बार्षिक २५० लिटरको कारोबार गर्ने, दैनिक दुध उत्पादित दुधको प्रशोधन गर्ने, दुध तथा दुधजन्य पदार्थहरुको बेचविखनको गर्ने लगायत काम सहकारी मार्फत हुने छ । अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहकारीमा आवद्ध किसानले सवै पशु वीमा गरेको हुनुपर्ने, किसानको फार्ममा जैविक सुरक्षा विधि अवलम्वन गरेको हुनुपर्ने छ ।
सहकारीको कारोबार गर्ने गरेको दुधको गुणस्तर न्यूनतम मापदण्ड भित्र परेका सहकारीले अनुदान वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थामा रही अनुदान कार्यक्रममा सहभागी बनेकोे गाउँपालिकाको पशुपन्छी समन्वय इकाईको दावी छ । गाउँपालिकाबाट प्राप्त अनुदान सहकारीमा आवद्ध रहेको दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई गाउँपालिकाको मापदण्ड अनुरुपमा नै किसानलाई अनुदान वितरण हुने प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाले सहकारी मार्फत प्रतिलिटर दुधमा एक रुपैयाँँ अनुदानको व्यवस्था गरेको हो । दुध उत्पादनका आधारमा मात्र अनुदान निर्धारण हुने गर्दछ । बढी दुध उत्पादन गर्ने किसानले बढी अनुदान र कम दुध उत्पादन गर्ने किसानले कम अनुदान पाउनेछन् । गाउँपालिकाले दुधमा अनुदानसँगै पशुपालन व्यवसाया युवा पुस्ताको आकर्षण बढ्ने छ ।